कुर्सि जोगाउन संकटकाल लगाउने की प्रचण्ड फकाउने ? - सिम्रिक खबर
कुर्सि जोगाउन संकटकाल लगाउने की प्रचण्ड फकाउने ?
पछिल्लो समय चीन ओलीलाई विश्वस गर्दछ । प्रम ओली आँफू चीनको फेरोमा देखिएर भारतलाई गलाउन चाहन्छन् । भारत प्रचण्डलाई हातमा लिएर ओलीलाई टिक्न नदिने खेलमा लागिरहेको छ । यसरी त्रिकोणात्मक चक्रव्यूहमा फँसिरहेको छ देश ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि बनहानामा प्रचण्डलाई मनाउन नसकेपछि आफ्नो पद बचाउने मेसोमा छन् । ओलीले नेपालमा हाल बढ्दो कोरोना संकटलाई मध्यनजर गर्दै देशमा स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर तत्काललाई संकट टार्ने प्रयास गरेको ओली खेमाका एक सांसद बताउँछन् । उनी भन्छन् “प्रचण्ड कमरेड कि अध्यक्ष पद छोड्नुस् कि प्रधानमन्त्री पद छोड्नुस् भनेर प्रम ज्यूलाई दवाव दिईरहनु भएको छ । प्रम ओलि आँफु दुबै पदमा चुनिएर आएकाले छोड्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न । दुबै नेताको कुराकानीले किनारा लगाउने छाँट छैन ।”
प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा नेता प्रचण्डको पाँचौ बार्ता पनि कुनै निर्णय विना सकिएको छ ।
सुत्रका अनुसार केहि दिनअघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति संग गरेको परामर्शमा संकटकालबारे कुरा भएको थियो । यसो भएमा कम्तीमा ३ महिनाको लागि प्रधानमन्त्री तनाब मुक्त हुनेछन् । तर राष्ट्रपति पनि संकटकालको पक्षमा नभएको सुत्र बताउँछ । राजनीतिक टकराबका कारण संकटकाल लगाउनु परेको भनेर सबैले थाहा पाउनेनै छन् । संकटकाल लागेमा राष्ट्रपति विरुद्ध पनि धेरै आरोपहरु आउन सक्छन् । यति मात्र होईन सेना समेत राजनीतिक अभिष्टका लागि आँफू प्रयोग हुने कुरामा असहमति जनाउने पक्का छ । भलै त्यो कुरा बाहिर नआउला ।
पार्टिको पछिल्लो स्थायी कमिटि बैठकले दुई नेतालाई मतभेद टुंग्याएर शुक्रबार निर्णय सहित स्थायि कमिटिको बैठकमा आउन सुझाब दिएको थियो । यसविच प्रचण्ड र प्रम ओलि बुधबार २ घण्टा वार्ता बस्दा पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । अब पार्टी स्थायि समितिको बैठक भोलि फेरी बस्नेछ । स्थायि कमिटि बैठकमा ओली अहिले अल्पमतामा छन् । भोलिको ठैठक टार्न पनि ओलिलाई हम्मे हम्मे पर्ने छ नै ।
आफ्नै पार्टीका सबै नेताहरुबाट एक्लिएका ओलिलाई चीनिया राजदूत होउ यान्छीले भने राम्रो साथ दिईरहेकी छन् । श्रोत भन्छ, चीचिया राजदूतको लविडले असन्तुष्ट प्रचण्डलाई फकाउन सकेको खण्डमा प्रम ओलिको संकट केहि मत्थर होला । जहाँ चीनिया राजदूत भीत्रि रुपमा प्रचण्डको सम्पर्कमा समेत छन् । तर प्रचण्डलाई लैनचौरले चरप्प समातेको छ । लैनचौरले प्रचण्डलाई ठूलो भरोसा दिलाएको छ । प्रचण्डको चाँडैनै विश्वस गर्ने स्वभाव छ । लैनचौरको लालच र आडले बिसको उन्नाईस टस मस गरेका छैनन उनी । प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन् प्रचण्ड चीनसंगको दुष्मनी पनि चाहँदैनन् । यदि चीनिया राजदूतले आग्रह गरेमा भलै उनमा ईच्छा नहोस् तर सिधा नो भन्ने ताकत भने राख्दैनन् ।
चीन र भारतको विग्रदो स्थितिका कारण पनि चीन नेपाललाई आफ्नो पक्षमा पार्न चाहन्छ, जसको उदाहरण हामी चीनिया राजदूतको सक्रियतालाई लिन सक्छौं । पछिल्लो समय चीन ओलीलाई विश्वस गर्दछ । प्रम ओली आँफू चीनको फेरोमा देखिएर भारतलाई गलाउन चाहन्छन् । भारत प्रचण्डलाई हातमा लिएर ओलीलाई टिक्न नदिने खेलमा लागिरहेको छ । यसरी त्रिकोणात्मक चक्रव्यूहमा फँसिरहेको छ देश ।
आर्थिक संकट, कोरोनाको कहर र प्रताडित जनतालाई बाँच्नका लागि पशुपतिनाथको कृपा जरुरि छ ।नेताहरुलाई त कर्सि खोस्न र बचाउँदैमा फुर्सद छैन ।